चोट, भंग र dislocation, निदान र पहिलो सहायता को साधारण संकेत
समय समयमा हरेक व्यक्ति फल्स वा केही हडताल बारे असफल। यस्तो awkwardness को नतिजा उपचार बिना केही दिनमा हुनेछ जो एउटा सजिलो चोट, वा गम्भीर भंग हुन सक्छ। के सबैलाई थाहा हुनुपर्छ पहिलो सहायता यस्तो घरेलू घाइते मा? हामी चोट, dislocation र भंग, र कसरी घर मा सही निदान गर्न को साधारण संकेत के हो बाहिर आंकडा गर्न प्रयास गर्नेछ।
Bruising - यो ...
चोट यांत्रिक प्रभाव परिणामस्वरूप बन्द चोट भनिन्छ। यो घाउ नरम तन्तु, आन्तरिक अङ्गहरू, जोडों र हड्डी फैलियो सक्छ। को व्यापक राय को चोट छ कि - एक सानो चोट जटिल उपचार आवश्यकता छैन। यो एक ठूलो misconception छ। आधुनिक चिकित्सा, त्यहाँ यस श्रेणीका क्षति को एक वर्गीकरण छ। कहिलेकाहीं चोट रोगी को जीवन र स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण खतरा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यस श्रेणीका चोट को खतरा layman कहिलेकाहीं यस्तो dislocation वा भंग बढी गम्भीर चोट लागेको तिनीहरूलाई भ्रममा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। को चोट छ को लक्षण र संकेत के हो? यो प्रश्नको जवाफ अघि, हामी तपाईंलाई यस्तै घटना घाइते गर्न सक्छन् के हेर्न प्रयास गर्नेछ। दैनिक जीवनमा, अक्सर झगडे मा फल्स मा चोटपटक, हार्ड वस्तुहरु टक्कर, कमाउन। साथै, यस कोटीमा क्षति प्रमुख परिवहन र औद्योगिक दुर्घटना मा उपलब्ध छन्।
लक्षण र चोट को संकेत
कुनै पनि चोट को मुख्य साइन - एक दुखाइ-Stricken ठाउँ। क्षति को डिग्री आधारमा कहिलेकाहीं hematoma देखा, सुनिंनु रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। अक्सर चोट लागेको एक limb वा अंग को समारोह भङ्ग। यो लक्षण छैन भने गम्भीर चोट लागेको केही घण्टामा unnoticed जान सक्नुहुन्छ। को क्षति पर्याप्त गम्भीर भने, चिकित्सा हेरविचार र एक व्यक्ति रोगी सङ्केत गर्छ लागि विशिष्ट चिकित्सा को नियुक्ति गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीं, एक चोट को पहिलो संकेत - मात्र दुखाइ र सुनिंनु, तर छाला को बाहिरको घाउ छ। Abrasions र खरोंच कुनै न कुनै, अनियमित सतहहरु मा फल्स मा उत्पन्न गर्न सक्छ।
घाइते को वर्गीकरण
आधिकारिक चिकित्सा यस्तो चोट रूपमा आघात, कठोरता चार डिग्री छ। पहिलो वर्गमा - सबैभन्दा नगण्य। यो बलियो पीडादायी sensations विशेषता घाउ समावेश छ। सुनिंनु र यस्तो चोट लागेको मा bruising अवलोकन छैन। सामान्यतया 1-2 दिन पछि सिकार पूर्ण अप्रिय घटना, कुनै पनि विशेष उपचार बिना बिर्सन्छन्।
अन्य चोट दोस्रो डिग्री को सुविधाहरू छ। यो वर्ग क्षति कम्तिमा पहिलो 24 घण्टा पीडादायी sensations उच्चारण फरक। प्रभावित क्षेत्र swells, संभवतः bruising वा abrasions।
जब तेस्रो-डिग्री चोट क्षतिग्रस्त मांसपेशीमा र tendons। को आघात सुनिंनु, bruising र गंभीर दुखाइ सँगसँगै छ। यस्तो क्षति गम्भीर उपचार र कहिलेकाहीं एकदम लामो पुनर्वास आवश्यक छ।
चौथो डिग्री को Bruising - यो जसको लागि जरुरी hospitalization आवश्यक धेरै गम्भीर क्षति छ। यी घाइते ठूलो उचाइ, दुर्घटना बाट गिरावट मा निदान छन्। अक्सर यो मात्र होइन नरम तन्तु, तर पनि आन्तरिक अङ्गहरू र हड्डी बिग्रेको छ।
जो चोटपटक विशेषता द्वारा शरीर को भागहरु?
शब्द "चोट" सम्झन्छन् को बहुमत मा आफ्नै बाल्यकाल र सधैं सक्रिय खेल को प्रक्रिया मा घुँडा ripoffs। वास्तवमा, मात्र limb चोट गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारका चोट लाग्न टाउको फिर्ता, coccyx, thorax, पेट, मस्तिष्क र आन्तरिक अङ्गहरू लागि विशेषता पनि छन्। अझै अक्सर औंलाहरु, कलाई, कुहिनो, काँध, पाखुरा को विस्तारित घाइते हात ग्रस्त छ। खुट्टा, shins, नितम्ब, घुँडा - अक्सर कम चरम को चोट लागेको आउँदैन। यस्तो क्षति को रसिद कसरी रोक्न? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा - बाहिर हतार र रूपमा ध्यान दिएर सकेसम्म सबै गर्न प्रयास छैन। घर मा र काममा आधारभूत सुरक्षा नियम पालन। सहज जूता लगाउने र तल हेर्न नबिर्स।
जोइन्टहरूमा Bruising वा dislocated?
एक contusion चोट एक dislocation छ संग अक्सर भ्रमित। वास्तवमा, क्षति दुवै लक्षण पर्याप्त यस्तै छ। Dislocation - हड्डी को articular सतहहरु र कहिलेकाहीं आपसमा आफ्नो प्राकृतिक स्थिति सापेक्ष मा परिवर्तन को खलबल विशेषता द्वारा एक संयुक्त विकार। त्यहाँ चोट, भंग र dislocation को केही सामान्य संकेत हो। यो सबै माथि, प्रभावित संयुक्त चोट मा एक मजबूत दुखाइ र तुरुन्तै पछि। प्रभावित limb समारोह को dislocation मा बिगडा। यस मामला मा, साथै पारंपरिक चोट edema, सुनिंनु र राता अवलोकन। कसरी समसामयिक dislocation layman चिन्न सक्छौं? यो चोट संयुक्त विकृति बाहिर देख्न साथ र गर्न सक्छन् प्रभावित limb को छोटा, कहिलेकाहीं यो एक अप्राकृतिक स्थिति लिन्छ।
भंग र contusion: सामान्य लक्षण र मतभेद
भंग - एक मजबूत झटका वा गिरावट को परिणाम हुन सक्छ कि अर्को चोट हो। यो क्षति जस्ताको तस्तै बिगडा हड्डी द्वारा विशेषता छ। यस्तो दुखाइ संग गंभीर चोट र धेरै क्षति edema छ। चोट, भंग र समान dislocation को अझै संकेत। यी सबै चोटहरु सँग उपचर्म रक्तस्राव पाइन्छन्, चोटपटक। भंग व्यवसायीक को पर्यवेक्षण अन्तर्गत उपचार आवश्यक छ, र केही अवस्थामा - अस्पताल बसाइ। कसरी dislocation वा चोट को आघात यो भेद गर्न?
नेत्रहीन, सजिलो तरिका भंग चरम निर्धारण गर्न। हात वा खुट्टा अस्वाभाविक देखिन्छ, जहाँ कुनै जोइन्टहरूमा छन् एक ठाउँमा बाङ्गो गर्न सकिन्छ। तपाईं भंग को क्षेत्र मा क्लिक गर्दा palpable हड्डी टुकडे हुन सक्छ, यो पनि तिनीहरूलाई कमी सुने गर्न सकिन्छ। चेतावनी! यस्तो लक्षण को खोज मा घाइते अस्पताल गर्न एम्बुलेन्स लिन वा कल गर्न एक जरुरी आवश्यकता छ।
सानातिना घाइते पहिलो सहायता
के भने एक चोट थियो? यो एक एकदम साधारण चोट, प्रत्येक सक्षम हुनुपर्छ जसमा पहिलो सहायता प्रदान छ। एक सुन्दर संकुचन संग प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्न - पहिलो कदम। यो बरफ वा चिसो पानी भिगो कपडा एक झोला हुन सक्छ। ठंडा प्रक्रियाहरु Tissues को प्रतिक्रिया सुस्त र दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ। यो hypothermia रोक्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं बरफ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै 10 भन्दा बढी मिनेट लागि यो लागू हुन्छ। जब पहिलो सहायता यस मामला मा चोट को संकेत के छ बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। लक्षण मूल्यांकन भएको, यदि तपाईं चिकित्सा सहायता आवश्यक छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि चोट एक बाहिरको छाला घाउ सँगसँगै छ, तिनीहरूले एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने संग उपचार गर्न, र त्यसपछि एक पट्टी लागू पक्का छन्।
गम्भीर चोट: लक्षण र पहिलो सहायता
को चोट गंभीर दुखाइ, सुनिंनु र व्यापक सँगसँगै हुन्छ, यो सिकार बाँकी सुनिश्चित गर्न पहिलो आवश्यक छ। यस तर्कको पहिलो सहायता अलिकति क्षति संग जस्तै हो। यो दुखाइ, सुनिंनु र bruising - चोट, भंग र dislocation को साधारण संकेत। पीडित को राम्रो-जा सुधार र रक्तस्राव उपचर्म एक चिसो संकुचन प्रयोग रोक्न। यदि सम्भव छ भने, यो एक दबाव पट्टी संग क्षतिग्रस्त क्षेत्र मा आयातित गर्न आवश्यक छ। जब गंभीर दुखाइ कुनै पनि सामान्य शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि कार्य इन्जेस्ट गर्न अनुमति दिएको छ। को चोट गम्भीर छ भने, उदाहरणका लागि, त्यहाँ मस्तिष्क चोट को संकेत, तुरुन्तै एउटा एम्बुलेन्स कल गर्नुपर्छ। सम्झना: तपाईं सिकार मुख्य कुरा मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने - कुनै हानि गर्न। कुनै पनि चोटपटक घाइते क्षेत्र मा अस्वीकार्य थर्मल प्रभाव मा। यो पनि कडाई मालिश र प्रभावित क्षेत्र RUB गर्न निषेध गरिएको छ। मा चोट पछि पहिलो दिन, यस्तो प्रक्रिया मात्र बिरामीको अवस्था exacerbate गर्न सक्नुहुन्छ।
चोटपटक कस्तो व्यवहार गर्ने?
एक चोट निदान गर्दा यो पनि हदसम्म, घाइते प्रकृति निर्धारण गर्न साथै थप गम्भीर चोट लागेको को संभावना निर्मूल महत्त्वपूर्ण छ। सही निदान मात्र एक डाक्टर हुन सक्छ। चोट, भंग र समान dislocation को संकेत। गम्भीर घाइते को मामला मा थप अनुसन्धान जोडों र हड्डी को चोट को likelihood निकाल्न बाहिर छ। सबैभन्दा अक्सर निको प्रक्रिया अघि बढाउने र relieves दुखाइ जो चोटपटक विशेष nanodiamonds उपयोग गरदै र दल्नु लागि निर्धारित। यो यस्तो "Fastum जेल", "Bystrum जेल", "Finalgon", "Espoli" र आफ्नो analogues रूपमा हो। nanodiamonds उपयोग गरदै को आवेदन यी विभाग को निर्माताहरु 'सिफारिसहरू पालना गर्नुहोस्। 2-3 दिन मा थर्मल चोट पछि रोगी प्रक्रियाहरु नियुक्त गर्न सकिन्छ। निर्धारित hospitalization गंभीर चोटपटक मा, सर्जरी केही अवस्थामा संकेत हुन सक्छ।
जब सानो चोट लागेको घर उपचार लोक व्यञ्जनहरु प्रयोग गरेर हुन सक्छ। यस निको लोशन को तयारी को लागि, बराबर अनुपात मा मह संग कागति को रस मिश्रण। परिणामस्वरूप मिश्रण कपास-gauze moisten र चोट को साइट लागू गर्नुपर्छ। यो लोशन एक दिन तीन पटक सम्म बनेको छ। यो गुण निको बन्दागोभी छ विश्वास छ। यो तरकारी को सलाद गम्भीर चोट र क्षति को मामला मा खाएको गर्न। घाउ र चोटपटक गोभी जब पात धेरै ठाउँमा punctured, र त्यसपछि प्रभावित साइटमा लागू गरियो। शीर्ष सामान्य लाउने छ।
एक चोट को साधारण संकेत - को सुनिंनु र bruising छ। तिनीहरूलाई सामना साधारण सिमी मद्दत गर्न सक्छ। कुक र उनको दबाउन र त्यसपछि दुखेको ठाउँ porridge संलग्न हुन्छन्। soreness चोट सामना गर्न कुनै पनि एजेन्ट शामिल मेन्थल मद्दत गर्न सक्छ। घाइते भएका राज्य सुविधा शेविंग लागि थोरै क्षति टूथपेस्ट वा जेल कारण गर्न अनुमति दिएको छ। यो लोक निर्धारण र कुनै पनि फार्मेसी nanodiamonds उपयोग गरदै प्रयोग गर्दा सावधान रहनुहोस्। जब एक संरचना जस्तै को पनि प्रशस्त र बारम्बार आवेदन छाला बिगार्न र जलन हुन सक्छ।
स्नायु विज्ञान, मास्को संस्थान: समीक्षा
कसरी रूसी bathhouse मा नुहाउने गर्न: सुझावहरू
ईजियन सागरमा टर्कीको रिजर्ट्स - एउटा प्रमोदवन जुन कसैलाई थाहा छैन
औषधि "स्ट्रेप्सिल्स": समीक्षाहरू, अनुप्रयोगहरू र भेदभाव
धार्मिक साइटहरु नयाँ Accommodation लातविया Accommodation
आउटडोर को नाम। सबैभन्दा स्वादिष्ट आउटडोर आफ्नो नाम
अपराधी कोड को लेख 142। निर्वाचन कागजात, referendum कागजातहरू को Falsification
Makarov एयर पिस्तौल एमआर-654: एक अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
'Olivier' सलाद: एक आधुनिक र मूल लागि नुस्खा